Imishini yezolimo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Imishini yezolimo
I-MTZ 82 (i-Belarus): incazelo, imininingwane, amandla
Ensimini kuyisiko ukubhekana nemisebenzi ngosizo lwamathuluzi akhethekile. Futhi lokhu kuphumelela uma isakhiwo sezwe elihlwanyelwe akuyona enkulu kakhulu. Ngezindawo ezinkulu, udinga umsizi onokwethenjelwa ongenza izinhlobo eziningi zomsebenzi oyinkimbinkimbi - ugandaganda. Umthamo we-MTZ 82 uyisinqumo esihle. Kuyisibonelo somgogodla we-wheeled wesitshalo jikelele, oye wakhiqizwa nguMinsk Tractor Works kusukela ngo-1978.
Noma yikuphi umsebenzi esakhiweni sezwe kuthatha isikhathi esiningi nomzamo. Ngakho-ke, abalimi baqhubeka besebenzisa imishini ekhethekile, njengabalimi. Kodwa awukwazi ukwenza le nyunithi. Ngaphandle kwe-adapter ekhethekile, ngeke ukwazi ukukhula ukhula noma umhlaba, kanye nokususa iqhwa nama-debris. Inqola enezihlalo ze-motoblock manje iyabiza kakhulu.
Amathuba "Kirovtsa" kwezolimo, izici zobuchwepheshe ze-trekta K-9000
Ithekrata ye-Kirovets yochungechunge lwe-K-9000 iyisibonelo somshini omusha wesithupha owenziwe esiteshini esidumile saseSt. Petersburg. I-t-9000 itektala yathola ithuba lokuba khona ngenxa yalokho okuhlangenwe nakho nokusetshenziswa kwentuthuko yamuva kwezobuchwepheshe kule ndawo. Umshini unomsebenzi ophezulu kakhulu wezobuchwepheshe kanye nezici zokusebenza, okukuvumela ukuthi kungagcini nje ukukhiqiza, kodwa ukudlula amaningi angaphandle afana ngezindlela eziningi.
I-Tractor "ama-Kirovets" K-700: incazelo, ukuguqulwa, izici
I-T-700 itekisi iyisibonelo esihle semishini yezolimo yaseSoviet. Ithektala yakhiqizwa cishe ingxenye yekhulu leminyaka futhi isadingeka kwezolimo. Kulesi sihloko uzofunda ngamakhono wegrekta ye-Kirovets K-700, ngencazelo eningiliziwe yezici zayo zobuchwepheshe, nezinzuzo nezinsalela zomshini nezinye izici eziningi.
Indlela yokusebenzisa ithuluzi "i-Tornado" yokulima
Umlimi wezinhlamvu "I-Tornado" - iyithuluzi lezolimo elisetshenziselwa ukulima. It ngcono kakhulu izinga kanye nesivinini somsebenzi emhlabeni. Kuze kube manje, leli thuluzi alitholakali emhlabeni jikelele. Iminyaka embalwa nje edlule, ngaphandle kwe-chopper namafosholo endaweni, kwakungekho lutho okufanele lwenze.
Izici zokusetshenziswa kwetractor T-150 kwezolimo
Ezolimo, akunakwenzeka ukwenza ngaphandle kwemishini ekhethekile. Yiqiniso, uma ulungisa indawo encane yomhlaba, ngeke kudingeke, kodwa uma usebenza ngokuzikhandla ekukhuleni izitshalo ezihlukahlukene noma ukukhulisa izilwane, kuyobe kunzima kakhulu ukwenza ngaphandle kwabasizi bamashini. Kulesi sihloko sizokhuluma ngomunye wezintambo ezidumile kakhulu zasemakhaya, okuye kwasiza abalimi iminyaka engaphezu kwengu-12.
Imithetho yokukhethwa kwama-crushers okusanhlamvu, incazelo nesithombe samamodeli athandwayo we-grinders okusanhlamvu
I-crusher ye-grain iyisakhi esiwusizo kakhulu eminyakeni yamuva, eyenzelwe ukunciphisa umsebenzi webalimi. Leli yunithi ihloselwe ukuvuna ukudla kokudla kwemfuyo nezinyoni. I-crusher yokusanhlamvu izokukusindisa ekudingeni ukukhipha okusanhlamvu, ukugaya futhi ukubuyisela emuva, bese ukhokhela imali.
Izinhlobo eziyinhloko zamazambane ze-motoblock, izinzuzo nezinkinga zokusebenzisa ingadi
Abakhiqizi bezobuchwepheshe bezolimo baqhubeka bekhulisa uhla lwabo, bezama ukujabulisa inombolo enkulu yabathengi. Akukade kudala, emapulazini amancane, ukuvuna kwenziwa kuphela ngesandla, kodwa namuhla isimo sesishintshile. Amapulazi amakhulu asebenzise imishini emikhulu yezolimo isikhathi eside, okuyinto engabizi lutho ezincane.
Izici eziyinhloko zikagandaganda MTZ-80 kwezolimo
Ezolimo, ukucubungula izindawo ezinkulu kuvame ukusetshenziswa imishini ekhethekile. Omunye walaba basizi yi-trekta MTZ-80, izici zobuchwepheshe esizicabangayo kulesi sihloko. Incazelo yesondo lesondo Isondo lesondo yiluhlelo oluvamile lwemishini yalesi silasi: injini iphakanyiswe ebhodini lebhobho legijimi kanye namafreyimu emagcekeni angemuva usebenzisa ama-consoles.
Izici zeDivaysi nezokusebenza zeTT-1221 ugandaganda
Imodeli yetractor MTZ 1221 (ngaphandle kwalokho "i-Belarus") ikhiqiza i- "MTZ-Holding". Lesi yisibonelo sesibili esithandwa kakhulu ngemuva kochungechunge lwe-MTZ 80. Umklamo ophumelelayo, ukuxhumeka kwemvelo kuvumela le moto ukuba ihlale ingumholi ekilasini layo kumazwe angaphambili e-USSR. Incazelo kanye nokuguqulwa kwe-trekta Umthamo we-MTZ 1221 uthathwa njengomthamo we-row-crop wezigaba ezimbili.
I-tracta mini eyenziwe ngokwayo kusuka ku-motoblock: imiyalelo ngesinyathelo ngesinyathelo
Abalimi abaningi abanezindawo ezincane zomhlaba, basebenzisa ama-tillers abaguqulwayo njengengxenye yogandaganda, njengoba ukuthenga umshini ogcwele ngeke kulungiswe eminyakeni eyishumi. Yeka ukuthi kunengqondo ukuthi ukuguqulwa kwe-motoblock kumatrokta amancane, ukuthi ungayisebenzisa kanjani futhi usebenzise idivayisi, uzofunda kulesi sihloko. Imisebenzi yensiza engadini nasemasimini I-mini-trekta esekelwe ku-motoblock, kuye ngokuklama kanye nezidingo zakho, ingasetshenziselwa ukususwa kweqhwa, ukukhishwa kwenhlabathi, ukuthutha impahla, ukutshala amazambane noma izitshalo ezinye.
Amakhono nezici zobuchwepheshe bomvuno wokuhlanganisa "Don-1500"
Hlanganisa umvuni "Don-1500" - lokhu kuyiminyaka engama-30 efanelekile emakethe, ikhwalithi enhle kakhulu, okwamanje isetshenziselwa ukusebenza emasimini. Kunzima ukukhetha inqubo yokusebenza ensimini. Kubalulekile ukukhetha imodeli ngenani elihle lezinzuzo futhi ungalahlekelwa imali. Mayelana nokuthi yiziphi izici zobuciko kanye nezakhiwo ze-model Don-1500 A, B, H no-P, sizoxoxa kule ngxenye.
Izinhlobo ezisemqoka zabavuni nezici zabo
Ibhizinisi lezolimo ngezimo zanamuhla likhula ngokushesha. Ukuvuna okusheshayo nokulula, izindlela ezehlukene zobuchwepheshe, amayunithi asebenzayo nemishini esetshenziswayo. Ukuvuna okusanhlamvu nezitshalo zefolda manje akunakwenzeka ukucabanga ngaphandle kokusetshenziswa kwezinhlamvu zezinhlamvu.
Amakhono wezobuchwepheshe we-MTZ-1523 ugandaganda, izinzuzo kanye nokulimala komodeli
Amatrakta awagcinwa ukunakekelwa kwabantu abanjalo, njengoba kuthiwa, amamodeli wakamuva wezimoto zomgibeli noma amathrekhi amakhulu amakhulu. Kodwa ngaphandle kwabo akunakwenzeka ukucabanga kwezolimo kanye nendawo yomphakathi. Ububanzi bemishini enjalo bukhula njalo, futhi uhlelo lwezokukhiqiza lwe-MTZ alufani. Cabangela enye yamatrakta athandwa kakhulu kulolu sitshalo, okuyi-MTZ-1253.
Hlanganisa "i-Acros 530": ukubuyekezwa, amakhono wezobuchwepheshe womodeli
Abahlanganisi abahlanganisayo banamuhla bagxile ekukhiqizeni okuphezulu nokucubungula kwenani elikhulu kakhulu lamasimu ezinsimu eziphezulu. "I-Akros 530" inqubo yobuchwepheshe ehlose ukuhlangana ngokuqondile nalezi zidingo eziphezulu embonini yezolimo.
Ama-rake-tedders aphakanyisiwe: isimiso somsebenzi, yenze ngokwakho
Sekuyiminyaka eminingi leminyaka, izitshalo zezolimo azizange zishintshe ifomu labo. Kwabonakala sengathi kwakungenakwenzeka ukuwathuthukisa. Konke kwashintsha lapho inqubekela phambili yesayensi nezobuchwepheshe ifika kule ndawo. Ngokuyinhloko, i-rake evamile yaba yinto elula ematokisini amancane-aqoshiwe ama-rakes-tedders, abuye abizwe ngokuthi ama-agitators.